दुध चिया कत्तिको पिउनु हुन्छ ? यो शरिरमा गएर यसरी बन्छ विष - Daily Lokmandu
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीदुध चिया कत्तिको पिउनु हुन्छ ? यो शरिरमा गएर यसरी बन्छ विष
दुध चिया कत्तिको पिउनु हुन्छ ? यो शरिरमा गएर यसरी बन्छ विष
July 11, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on दुध चिया कत्तिको पिउनु हुन्छ ? यो शरिरमा गएर यसरी बन्छ विष
अरु मौषममा दुधको चिया मन नपराउने मान्छे जाडो याममा भने खान नकार्दैनन् दुधको चिया बारेमा एउटा तथ्य बाहिर आएको छ । दुधको एक थोपाले चियाको पुरै फाइदालाई शुन्य बनाइदिन्छ ।
के हुन्छ चियामा ?
विशेष गरी कालो चियामा प्रशस्तै एण्टि अक्सिडेन्ट र भिटामिन पाइन्छ, यसले रगतमा सुगरको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ, कोष क्षयलाई रोक्छ, मुटुसम्बन्धी रोगबाट पनि बचाउँछ तर चियामा अलिकति पनि दूध मिसायो भने त्यसले फाइदा भन्दा बढि बेफाइदा गर्दछ । दूधमा पाइने प्रोटिन ‘क्यासिन’ले गर्दा चियामा पैदा हुने ‘क्याटेचिन’को मात्रामा कमि हुने गर्दछ, ।
मिल्क टि होईन ब्ल्याक टि रोजौं,कारण छ यस्तो-
विश्व भरी नै चियाका पारखीहरु भेटीन्छन् । यसमा पाईने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरमा स्फूर्ती एबं ईनर्जी भरीदिन्छ ।चिया स्वादको लागी मात्र नभई स्वास्थ्यको हिसावले पनि उचीत मानीन्छ ।मानीसहरु धेरै जसो रोज्दा कालो चिया भन्दा बढी दूध चिया नै रोज्ने गर्दछन् तर सकेसम्म स्वास्थ्यको हिसावले दूधको चिया प्रयोग भने गर्नुहुँदैन ।दूधको चियाले खाना अरुची हुने ग्यास्ट्रीक बढेने जस्ता समस्या देखा पर्दछन् ।
कालो चियाले पाचन प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ । जसका कारण मानिस पेटको रोग लाग्नबाट बच्न सक्छ । कालो चियाको प्रयोगले पेटको दुखाइ, ग्यास्ट्रिकजस्ता समस्याबाट पनि मुक्ति दिलाउने काम गर्छ ।
नियमित रूपमा कालो चिया पिउँदा तौल र पाचन प्रणाली व्यवस्थित बन्छ । जसका कारण मानिसलाई ‘हर्ट स्ट्रोक’को खतरा कम हुन्छ ।
अमेरिकन हर्ट एसोसिएसनको अनुसन्धानअनुसार कालो चियाले शरीरमा भएको खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्छ । कोलेस्ट्रोल हर्ट स्ट्रोकका लागि खतरनाक मानिन्छ ।
कतिपय मानिसमा रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएका कारण छोटो–छोटो समयमा बिरामी हुने समस्याले दिक्क हुन्छ । यस्ता मानिसलाई पनि कालो चिया हितकर हुन्छ ।
कालो चियाले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई बढाउँदै लैजाने काम गर्छ । यसले साइनस, डायरिया, निमोनियाजस्ता रोग लाग्ने सम्भावनालाई पनि दूर गर्ने काम गर्छ ।
कालो चियाले शरीरमा ‘थैफ्लोविन्स’ अर्थात् क्यान्सर बनाउन सक्ने कोषिकालाई हटाउने काम गर्छ । यस्ता कोषिका निर्मूल हुँदा विशेषगरी मानिसलाई ‘ओवेरियन क्यान्सर’बाट जोगाउने गर्छ ।
हात-खुट्टा या शरिरमा मुसा,खटिरा,गानो आएको छ भने निको पार्ने आईडियामुलक टिप्स …
डरलाग्दो भविष्यवाणि ! नुवाकोटको भैरवी मन्दिरका धामीले २०७५ सालको बारेमा यस्तो भविष्यवाणि